अमेरिकाको टेक्सासमा दोश्रो एभरेष्ट कवि गोष्ठी सम्पन्न – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०२:०६ English
अमेरिकाको टेक्सासमा दोश्रो एभरेष्ट कवि गोष्ठी सम्पन्न
बिकाश राज न्यौपाने, टेक्सास, अमेरिका । डल्लास एभरेष्ट लायन्स क्लबले अक्टोबर २०, २०१३ आईतवारका दिन दसैं तिहारको शुभ उपलक्ष्यमा आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्न, नेपाली भाषा एवम् साहित्यमा अभिरुचि राख्नेहरुका बिच सिर्जनात्मक ब्यक्तित्व विकास गराउन र आपसमा भाईचाराको सम्बन्ध विकसित गर्ने उध्देश्यले प्रतियोगितात्मक दोश्रो Everest Poetic Symposium (कवि गोष्ठी) को आयोजना टेक्सासको डल्लासमा गर्‍यो।
झन्डै १०० कवि/कवयत्री भेला भएको उक्त गोष्ठी मा ८ प्रतियोगी र ५ अप्रतियोगी कविता बाचन गरिएको थियो । क्लबकी अध्यक्ष इरा आचार्यको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा क्लब कै सदस्य केशब लामिछानेले स्वागत, पूर्व अध्यक्ष राम पोखरेलले लायन्सको नियम अनुसार “Pray” गर्नु भएको थियो।
मुर्धन्य साहित्यकार बिप्लव प्रतिक, साहित्यकार शैलेश आचार्य, महेन्द्र पौडेल निर्णायक रहनु भएको उक्त प्रतियोगितामा राधाकृष्ण काफ्ले प्रथम, दिनेश ज्ञवाली/कवि शर्मा दोश्रो तथा शिलु घिमिरे/भगवती पौडेल तेश्रो हुनुभएको थियो। शशी भट्टराईको रोमान्चक उद्घोषणमा भएको उक्त कार्यक्रममा भुटनीज समुदायका उदाउँदा लेखक ड़ेंजोंग को “स्वीकारोक्ति” संग्रहको बिमोचन साहित्यकार बिप्लव प्रतिकले गर्नु भयो।
विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु रहेको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा NST अध्यक्ष डा. प्रेम अधिकारी, NCSC का संयोजक डा. मुरली अधिकारी, ICA का महासचिब तारा भुषाल, ONF का केन्दिय उपादक्ष्य जीवन जोशी लगायत का बक्ताहरुले शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो।
NamasteUS.com online television संग कुरा गर्दै कार्यक्रम मा Dallas Everest Lions Club का पूर्व अध्यक्ष मकर बज्राचार्यले अपेक्षित उपस्थित नभए पनि कार्यक्रम सफल भएको बताउनुभयो।
५ कार्तिक २०७०, मंगलवार ०२:४४ मा प्रकाशित